Android sinoa - Androidsis | Androidsis (Pejy 2)
Cubot P40 no telefaona manaraka avy amin'ny mpanamboatra aziatika hampiditra fakan-tsary fakan-tsary King King. Ho tonga ao anatin'ny 10 andro monja.
Naseho ny famolavolana telefaona Cubot vaovao
Cubot dia nanome ny antsipiriany voalohany amin'ny telefaona manaraka: Cubot 20. Fitaovana 4G izay ho hita amin'ny 1 Jona.
Tecno Spark 5: telefaona fakantsary quad vaovao sy Android 10
Tecno Mobile dia nanambara fitaovana vaovao ao amin'ny tsipika Spark: Tecno Spark 5. Fitaovana farany ambany miaraka amin'ny sensor efatra aoriana.
Oppo A92 dia finday avo lenta vaovao midadasika miaraka amin'ny Snapdragon 665 sy ColorOS 7.1
Ny Oppo A92 vaovao dia natolotra tamin'ny fomba ofisialy ary io no Oppo A72 malaza izay havoaka tsy ho ela ao Malezia.
Realme X50m 5G: kinova teti-bola vaovao an'ny fianakaviana X50
Realme dia nanambara ny fitaovana 5G vaovao izay nampanantenainy fa hanomboka amin'ity herinandro ity. Ity ny Realme X50m, fitaovana antonony hodinihina.
Oppo A72: fitaovana vaovao misy tontonana 6,5 ″, Snapdragon 665 ary ColorOS 7
Oppo A72 no fitaovana fidirana vaovao avy amin'ny orinasa sinoa. Nambara tany Alemana izany ary havoaka any Eropa aloha.
Oppo A52 dia ofisialy amin'ny Snapdragon 665 sy ColorOS 7
Oppo dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny A52 vaovao, fitaovana antonony manana fahombiazana somary antonony raha ny fahitana azy voalohany.
Oppo Find X2 Neo dia hita ao amin'ny magazay eoropeanina misy RAM 12 GB sy Snapdragon 765G
Ny tsipika Find X2 dia hitatra amin'ny fanombohana singa vaovao, ny Find X2 Neo. Fitaovana iray nipoitra tao amin'ny magazay eoropeanina.
Oppo A92S dia ofisialy: telefaona 5G vaovao miaraka amin'ny processeur Dimensity 800
Oppo A92S izao dia ofisialy aorian'ny famoahana rano maromaro, ao anatin'izany ny fampahalalana amin'ny tontonana, ny loko ahatongavany sy ny sarin'ilay fitaovana.
Nubia Play dia mampiseho ny fampidirany voalohany, ny silhouette ary ny boaty fivarotana azy
Nubia dia hanambara amin'ny 21 martsa ny telefaona vaovao antsoina hoe Nubia Play, fitaovana afovoany manana fahaiza-manao 5G.
Hisense F50 no finday 5G voalohany avy amin'ny orinasa sinoa
HiSense dia hanolotra ny telefaona 5G voalohany antsoina hoe F50 amin'ny alatsinainy, fitaovana iray mampiditra chip avy amin'ny mpanamboatra Unisoc.
Oppo A12 dia mandeha amin'ny alàlan'ny fanamarinana Bluetooth mampiseho ny mampiavaka azy
Oppo A12 dia mandalo ny fanamarinana Bluetooth alohan'ny hanambarana azy amin'ny fomba ofisialy mampiseho antsipiriany manan-danja toy ny efijery, bateria ary singa hafa.
Nanamafy i Vivo Y50: telefaona tontonana 6,53 with misy fakan-tsary fakan-tsary
Vivo Kambodza dia nanamafy telefaona vaovao ho an'ny tsena aziatika tamin'ny voalohany, ny Vivo Y50. Izy io dia eo afovoany misy bateria tsara.
Oppo Find X2 Lite dia manambara ny sariny sy ny mombamomba azy
Ny sary feno sy ny antsipiriany momba ny Oppo Find X2 Lite, mpikambana vaovao ao amin'ny fianakaviana Find X2, dia naseho.
Infinix dia manolotra telefaona Note 7 sy Note 7 Lite vaovao miaraka amin'ny Android 10
Nanangana smartphone roa vaovao ny mpanamboatra Hong Kong Infinix, ny Note 7 sy Note 7 Lite. Izy ireo dia terminal afovoany midadasika izay ho avy tsy ho ela.
Antony 5 hividianana ny finday avo lenta smartphone Cubot King Kong CS
Raha mitady finday avo lenta amin'ny vidiny mirary ianao dia tokony hijery ny Cubot King Kong CS, smartphone iray latsaky ny $ 100.
Vivo S6 5G izao dia ofisialy taorian'ny fivoahana marobe talohan'ny nanombohany tamin'ny tsena Aziatika. Fantaro ny vaovao rehetra momba ity telefaona vaovao ity.
Ny Oppo Reno Ace 2 dia manambara ny fiasa rehetra ao amin'ny TENAA
Oppo Reno Ace 2 no telefaona manaraka amin'ny orinasa natomboka, izany rehetra izany taorian'ny fahatongavan'ireo sainam-pirenen'i Find X2 roa.
Vivo S6 5G dia mampiseho ny endriny ary manambara ny sensor 48 MP lehibe
Vivo dia nanambara ny sary voalohany an'ny S6 5G, telefaona manana sensor lehibe lehibe ary ho tonga afaka herinandro mahery.
Ho tonga miaraka amin'ny 6G i Vivo S5, naseho ny teaser voalohany
Ny Vivo S6 miaraka amin'ny 5G dia nosoloina modem 5G ary ho lasa revolisiona miaraka amin'ny taranaka fahadimy, ankoatry ny zavatra hafa.
Blackview mankalaza ny faha-7 taonany amin'ny fanomezana mahafinaritra
Mba hankalazana ny faha-7 taonan'ny Blackview, mpanao finday maranitra, manolotra fihenam-bidy sy freebies mahafinaritra ity orinasa ity
Infinix S5 Pro dia ofisialy miaraka amin'ny fakan-tsary selfie pop-up ary XOS 6.0
Ny Infinix S5 Pro vaovao izao dia ofisialy miaraka amin'ny fakantsary selfie pop-up ary endri-javatra tena manandanja na eo aza ny vidiny ambany.
Vivo NEX 3s 5G dia ho tonga miaraka amin'ny Snapdragon 865 sy fakan-tsary telo
Vivo dia naneho tranofiara horonantsary sy sary roa an'ny telefaona manaraka fantatra amin'ny anarana hoe NEX 3s 5G. Hiseho amin'ny 10 amin'ity volana ity izy io.
TCL dia manambara foto-kevitra telefaonina roa azo ahodina sy miovaova
TCL dia nanambara hevitra roa vaovao momba ny telefaona, malefaka sy azo aforitra. Samy eo amin'ny dingana matotra izy roa alohan'ny hamoahana azy amin'ny fomba ofisialy.
Naseho ny antsipiriany feno amin'ny sainam-piaramanidina vaovao Oppo, ny Find X2 Pro, telefaona iray izay hambara amin'ny 6 martsa.
Oppo Find X2 Pro dia manambara fakan-tsarimihetsika periskope amin'ny sary fampiroboroboana
Sary fampiroboroboana dia mampiseho fakan-tsary periscope Find X2 Pro an'ny Oppo, telefaona iray izay ho tonga miaraka amin'ny Oppo Find X2.
Ny Oppo Find X2 dia haseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 6 martsa
Navoaka ny afisy amin'ilay hetsika kasaina hataon'i Oppo, izay hanolotra ny Find X2 amin'ny 6 martsa. Hatao izany miaraka amin'ireo vokatra hafa.
iQOO 3 5G dia ofisialy miaraka amin'ny entana Snapdragon 865 sy 55W
Ny iQOO dia namoaka tamin'ny fomba ofisialy ny 3 5G vaovao, telefaona iray miaraka amina processeur matanjaka ao Qualcomm ary ao anaty karazany telo azo ampiasaina.
Meizu 17 dia ho tonga amin'ny volana aprily miaraka amin'ny efijery 90 Hz
Meizu 17 dia ho tonga amin'ny volana aprily ary misy antsipiriany vaovao fantatra alohan'ny hamoahana azy eo amin'ny tsena aziatika ho safidy lehibe.
Famoahana Infinix S5 Pro mampiseho fakan-tsary selfie pop-up
Navoaka ny Infinix S5 Pro, mampiseho fakantsary selfie pop-up izy ary eo an-damosiny koa dia mampiseho sensor telo.
Oppo dia manambara ny takelaka fanavaozana ColorOS 7
Ny Color OS 7 dia ho tonga amin'ny volana manaraka, manokana amin'ny telefaona sasany amin'ny 10 martsa ary amin'ny 20 martsa dia hanao izany amin'ny terminal telo toy ny mahazatra.
iQOO 3 5G dia mahazo isa ambony indrindra amin'ny AnTuTu
Ny iQOO 3 5G vaovao dia iray amin'ireo telefaona haingana indrindra eny an-tsena tsy misy fisalasalana noho ny fikirakirana azy, ny RAM ary ny UFS 3.1 fitehirizana.
Oppo A31 dia ofisialy: efijery 6,5 ″ ary ColorOS 6.1
Rehefa avy namoaka ny pitsopitsony rehetra i Oppo dia naniry ny hanambara ny Oppo A31 vaovao, telefaona iray izay efa misy any Indonezia.
Saika voasivana avokoa ny pitsopitsony ara-teknikan'ny Oppo A31
Saika naseho ny antsipiriany rehetra momba ny Oppo A31 ho avy, finday iray izay nandalo Geekbench sy Bluetooth fanamarinana vao tsy ela akory izay.
Oppo dia manamafy ny fampahalalana rehetra amin'ny efijery Find X2
Ny tale jeneralin'ny Oppo dia nanamafy ny tontolon'ny Find X2 vaovao izay haseho amin'ny 22 Febroary amin'ny hetsika MWC 2020 any Barcelona.
Vivo V19 Pro dia hatao amin'ny fiandohan'ny volana martsa
Hanambara ny orinasan'ny Vivo amin'ny voalohan'ny volana martsa ny fanoloana ny Vivo V17 Pro, fantatra amin'ny anarana hoe V19 Pro.
Oppo dia manambara ny Reno 3 Vitality, miaraka amin'ny CPU tsara kokoa ary fakan-tsary ambany
Oppo dia nanangana karazana Reno 3 antsoina hoe Reno 3 Vitality, fitaovana finday iray izay manampy fanatsarana voalohany.
Vivo Y91C, ny afovoany vaovao an'ny orinasa sinoa
Vivo dia nanambara ny telefaona Y91C vaovao izay efa misy any Bangladesh ankehitriny ary tonga toy ny karazana modely Y91i.
Nohamafisin'ny Oppo Find X2 tamin'ny fomba ofisialy: haseho amin'ny 22 Febroary
Oppo dia nanamafy ny andro sy ny fotoana fampisehoana ny sainam-pirenena manaraka, ny Find X2. Tonga ny nandimby an'i Find X afaka roa taona latsaka.
Ulefone Armor 7, finday goavambe tsy latsaky ny 500 euro
Ulefone dia mandefa ilay Armour 7 vaovao, telefaona natao handalovana ny karazana fitsapana faharetana, izay latsaky ny 500 €.
Ny Realme C3 dia manambara ny masontsivana rehetra alohan'ny hanehoana azy
Ny pejy fandraisana an'i Flipkart's Realme C3 dia nanambara ny antsipirihany rehetra momba an'ity telefaona vaovao ity izay havoaka amin'ny 6 Febroary.
Manomboka mahazo ny fanavaozana Android 10 ny TCL Plex
TCL dia manapa-kevitra ny hanavao ny terminal Plex aorian'ny fandefasana azy amin'ny volana oktobra. Raiso ny fanatsarana Android 10 sy taonina.
Nafanafana i Nokia talohan'ny MWC 2020: io no laharana fidirana manaraka
Izahay dia manome anao ny antsipiriany rehetra momba ny Nokia 4.3, ny finday avo lenta fidirana avy amin'ny orinasa Finnish ary haseho ao amin'ny MWC 2020.
Nisy telefaona Oppo vaovao nandalo ny fanamarinana TENAA
Nisy telefaona Oppo vaovao nandalo tao amin'ny FCC izay mampiseho antsipirihany teknika maro talohan'ny fampisehoana ofisialy azy ity tamin'ny 2020.
Nubia Red Magic 5G dia hanana charger 55W
Ny Red Magic 5G vaovao avy any Nubia dia ho lasa iray amin'ireo finday avo lenta manaraka izay manana tahan'ny famelomana efijery avo indrindra eny an-tsena.
Oppo Find X2 dia hanana efijery 120Hz QHD +
Oppo Find X2 dia ho iray amin'ireo fitaovana manaraka miaraka amin'ny fampisehoana 120Hz QHD +. Ny fahatongavany dia manondro ny telovolana voalohany amin'ity taona ity.
Misy telefaona Oppo vaovao mandalo ny fanamarinana Bluetooth
Hanokatra telefaona finday tsy ho ela ny mpanamboatra Oppo. Nandany ny fanamarinana Bluetooth SIG izy ary naneho ny antsipiriany voalohany.
Doogee S95 Pro dia ofisialy: Fantaro ny endriny rehetra
Doogee te-hanohy amin'ny tsena finday misitery amin'ny alàlan'ny fanombohana ny S95 Pro vaovao, fitaovana iray somary lasibatra.
Gionee Steel 5, telefaona antonony manaraka ny marika
Niverina teny an-tsena i Gionee niaraka tamin'ny telefaona vaovao antsoina hoe Steel 5 ary natokana ho an'ny besinimaro noho ireo fiasa antonony.
Vivo V1950A dia hita ao amin'ny TENAA ho karazana NEX 3 5G
Vivo dia miasa amin'ny fandefasana telefaona 5G marobe ary ny Vivo V1950A dia ho iray amin'izy ireo aorian'ny nandalo ny FCC tamin'ity haitao ity.
Hisense dia naneho telefaona misy efijery e-ink miloko amin'ny CES 2020, rehefa avy naneho iray tamin'ny monochrome teo aloha izy rehetra.
Realme C2 dia nanambara momba ny tsena Thai
Realme dia mandefa fanavaozana fotsiny ny maodely C2 ho an'ny tsena Thai antsoina hoe Realme C2s. Tonga amin'ny vidiny ambany ny telefaona.
Oppo dia manaparitaka telefaona fakan-tsarimihetsika fakan-tsary
Oppo dia nanala paty telefaona misy fakan-tsarimihetsika pop-up, indrindra hita amin'ny iray amin'ireo sisin'ny finday io.
Efa manana ny datin'ny fahatongavan'ilay Realme 5i vaovao isika mihoatra ny fanamafisana hoe firenena iza no hahatongavany voalohany. Tonga amin'ny fiandohan'ny taona 2020 izy io.
Oppo dia handefa smartphone vaovao any India miaraka amin'ny anarana F15, io ilay Oppo A91 malaza natsangana andro vitsivitsy lasa izay tany Shina.
Ny tsipika Openo's Reno 3 dia niteraka firaketana mahaliana marobe tany Sina raha vao nambara tamin'ny 26 Desambra.
Tonga any India ny Vivo S1 Pro amin'ny 4 Janoary
Handray ny Vivo S1 Pro i India amin'ny fiandohan'ny volana Janoary amin'ny loko roa ary tsy isalasalana fa iray amin'ireo finday avo lenta andrasana indrindra amin'ny marika aziatika izany.
Mitady finday mora vidy tsara ve ianao? Ny Realme 5 Pro dia mora kokoa noho ny hatramin'izay tany Amazon
Amin'ny fahatongavan'ireo fialantsasatry ny Noely dia manararaotra mandefa fihenam-bidy mahaliana amin'ny isan-karazany ny orinasa lehibe ...
Vivo dia hampiseho smartphone vaovao amin'ny MWC 2020
Vivo dia nanamafy ny fanatrehany ny Mobile World Congress 2020 any Barcelona. Izy io dia manao izany amin'ny famantarana ary mampiseho V any aoriana.
OUKITEL C17 Pro, ny zava-bita teo afovoany misy fakantsary telo izay nosoniavin'i Sony ary be dia be hatolotra vola kely
Manomboka amin'ny 22 ka hatramin'ny 29 Jolay dia afaka manararaotra an'ity tolotra ity ianao ary mahazo ny Oukitel Y4800 miaraka amin'ny fihenam-bidy 50 dolara amin'ny vidiny farany.
Raha te hanamarina ny kalitaon'ny fakantsary Oukitel Y4800 ianao dia manasa anao aho hijery izany ho anao ao amin'ilay horonan-tsary asehonay anao amin'ity lahatsoratra ity
Fitsapana fampisehoana vaovao an'ny Oukitel Y4800, terminal iray izay hamely ny tsena amin'ny tapaky ny volana Jolay amin'ny $ 199.
Raha te hanamarina ny kalitaon'ny Oukitel K12 vaovao ianao dia asehon'ilay orinasa horonantsary iray izay ahitantsika ny fitsapana rehetra ataon'izy ireo momba azy.
OUKITEL K12, bateria 10.000 mAh ary maro hafa
Ny OUKITEL K12 vaovao dia manome antsika bateria 10.000 mAh goavambe ao anaty vatana kanto vita amin'ny lamosina hoditra sy maro hafa.
Fampitahana eo amin'ny Oukitel Y4800 sy ny Redmi Note 7
Raha tsy manana kilasy holazaina momba ny Redmi Note 7 na Oukitel Y4800 ianao dia manasa anao hanohy hamaky mba hanapahana hevitra ny iray amin'izy roa.
Vivo Y15: ny afovoany vaovao an'ny marika
Fantaro ny momba ny Vivo Y15, telefaona antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany India.
Antony 5 hividianana ny Oukitel K9
Raha mbola tsy azonao antoka fa ny Oukitel no finday avo lenta ilainao, amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao antony 5 hamaranana ny fiovanao ianao.
Realme 3 Pro: vidiny sy misy any Espana
Ny orinasa Aziatika Realme dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny vidiny sy ny fisian'ny Realme 3 Pro, finday avo lenta voalohany amidy amin'ny fomba ofisialy any Espana
Tafaporitsaka tanteraka ny OPPO K3: naseho ny endrika sy ny endrika
Sivanina ny famolavolana sy ny toetran'ny OPPO K3, ny elanelam-potoana vaovao an'ny mpamokatra Aziatika izay misongadina amin'ny fakantsary azo esorina mba hisorohana ilay toerana.
Oukitel dia hanomboka ny laharana Young vaovao miaraka amin'ny Y4800 sy ny fakantsary 48 mpx
Ireo tovolahy avy any Oukitel dia mandefa fitaovana isan-karazany amin'ny teti-bola rehetra mandritra ny taona. Na izany aza, toa ...
Azontsika atao izao ny mitazona ny Oukitel K9
Ny sahan'i Oukitel, ny K9 dia azo amidy mialoha miaraka amina fihenam-bidy lehibe amin'ny vidiny farany $ 249,99.
Ny Oukitel K12, miaraka amin'ny bateria 10.000 mAh, dia hamely ny tsena amin'ny volana Jona
Hanangana ny K12 amin'ny volana jona ny orinasan-tsambo aziatika Oukitel, terminal misy bateria 10.000 mAh mahery.
Vivo S1 Pro: Ny elanelam-potoana vaovao misy fakantsary azo esorina
Fantaro bebe kokoa momba ny famaritana ny Vivo S1 Pro, ilay telefaona antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa izay efa natomboka eny an-tsena.
Amin'ny 13 Mey, ny Oukitel K9 dia efa voatokana
Manomboka amin'ny 13 Mey ho avy izao, afaka mitahiry ny Oukitel K9 ianao ary amin'izany dia hitahiry vola 50 dolara amin'ny vidiny farany eo amin'ny tsena.
Vivo Z3X: ny marika afovoany vaovao an'ny marika
Fantaro misimisy kokoa momba ny fanombohana ny Vivo Z3X, ilay telefaona antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny Meizu 16S dia amidy amin'ny andro voalohany amidy
Fantaro misimisy kokoa ny momba ny varotra Meizu 16S tamin'ny andro voalohany tany Chine izay namidy tao anatin'ny ora vitsivitsy monja tao amin'ny firenena.
Nubia's Red Magic 3 dia mampiseho hozatra amin'ny Geekbench. Ny smartphone finday tsara indrindra eny an-tsena?
Ny Red Magic 3 avy any Nubia, finday manaraka avy amin'ny orinasa sinoa, dia mandalo an'i Geekbench izay mampiseho vokatra mahavariana. Aza adino izany!
Tonga any Eropa ny OPPO Reno
Ny OPPO Reno dia efa natolotra tany Eropa ary ny daty fandefasana azy ireo ary ny vidiny hanombohana azy ireo dia efa voamarina.
OPPO A1K: ny haavon'ny fidirana vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ny OPPO A1K, finday vaovao ao anatin'ny faran'ny ambany ny marika sinoa, natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Russia.
OUKITEL K12: smartphone vaovao an'ny marika
Tadiavo ny fanondroana voalohany an'ny OUKITEL K12, finday avo lenta vaovao miaraka amin'ny bateria lehibe iray tonga amin'ity lohataona ity.
Fantaro ny momba ny Realme C2, ny finday avo lenta farany ambany avy amin'ny marika sinoa efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Realme 3 Pro: Ny afovoany vaovao an'ny marika
Jereo ny pitsony feno momba ny Realme 3 Pro, ny finday avo lenta antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
OPPO dia manafoana telefaona R isan-karazany
Fantaro bebe kokoa momba ny fanafoanana ny telefaona OPPO R, izay maneho ny fiovan'ny paikady ho an'ny mpanamboatra sinoa.
Ny ASUS ROG Phone 2 dia hapetraka amin'ny telovolana fahatelo
Fantaro misimisy kokoa momba ny fahatongavan'ny ASUS ROG Phone 2, izay tokony hitranga amin'ity fahavaratra ity na dia any China aza no hananganana azy.
Huawei dia manamafy fa amin'ny taona 2019 izy no ho mpanamboatra finday avo lenta indrindra eran-tany
Raha ny filazan'ny CEO an'ny Huawei, amin'ny taona 2019, dia ho tonga miaraka amin'i HONOR, mpanamboatra finday avo lenta indrindra eto an-tany.
OPPO dia manambara ny vidin'ny Reno ao amin'ny tranokalany
Fantaro bebe kokoa ny vidin'ny OPPO Reno izay ho hita, toy ny hita tao amin'ny tranonkalan'ny marika sinoa tato anatin'ny ora vitsivitsy.
Poptel V9: finday avo lenta ho an'ny trano misy fiasa maro
Raha mitady finday ho an'ny tranonao miaraka amina endri-javatra marobe ianao, ny Poptel V9 dia mety ho ny smartphone tadiavinao.
Vivo S1: telefaona vaovao eo anelanelan'ny marika
Fantaro ny momba ny Vivo S1, ny finday avo lenta antonony vaovao avy amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy ary hatomboka tsy ho ela.
Meitu dia hitsahatra tsy hamokatra finday intsony
Fantaro bebe kokoa momba ny fanambaràn'i Meitu izay manamafy fa hijanona tsy hamokatra finday maharitra intsony izy ireo noho ny varotra ratsy.
OPPO dia manoratra telefaona dimy an'ny marika Reno any Eropa
Fantaro bebe kokoa momba ny fisoratana anarana amin'ny finday avo lenta OPPO izay nosoratany tany Eropa ao anatin'ny faritra Reno izay hamely ny tsena amin'ny volana aprily.
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny Vivo X27 sy X27 Pro
Fantaro ny momba ny Vivo X27 sy Vivo X27 Pro, maodely vaovao afovoany vaovao amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
OPPO AX5s: Faritra fidirana vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ny OPPO AX5s, finday ambany farany ambany avy amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy tany Shina.
Fantaro misimisy kokoa momba ny antsipirian'ny OPPO F11 izay efa natolotry ny marika tamin'ny hetsika iray tany India ary tsy ho ela dia hiantsena amin'ny fivarotana.
Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny OPPO F11 Pro
Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana ny OPPO F11 Pro any India, izay ahalalantsika ny antsipiriany feno amin'ny telefaona.
Manomboka rahampitso dia efa azonao atao ny mitahiry ny Oukitel C13 Pro
Efa niresaka nandritra ny herinandro maromaro momba ny fanombohana manaraka ny Oukitel, finday avo lenta ho an'ny paosy ara-toekarena indrindra izahay. Miresaka izahay…
Vivo V15: fakantsary azo esorina sy fakan-tsary triple aoriana ho an'ity elanelam-potoana ity
Jereo ny antsipirian'ny Vivo V15, ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa miaraka amina fakantsary azo esorina aloha sy fakan-tsary telo any aoriana.
Vivo IQOO: ofisialy ny telefaona voalohany an'ny IQOO
Fantaro bebe kokoa momba ny antsipirian'ny Vivo IQOO, telefaona voalohany an'ny marika sinoa vaovao efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny fampifanarahana andrasana amin'ny Pocophone sy ny serivisy HD amin'ny serivisy horonantsary mivantana dia efa ho tonga amin'ny endrika fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA
Araraoty ity tolotra ity ary mividiana ny Ulefone Armor 5 amin'ny vidiny 155 euro fotsiny
Raha mikasa ny hanavao ny finday avo lenta ianao ary mitady modely henjana dia azo inoana fa hahaliana anao ny tolotra omen'i TomTop anay.
Ny Oukitel C15 Pro dia hamely ny tsena amin'ny Android 9 Pie sy 5G mifanentana
Ny tsaho farany mifandraika amin'ny orinasan'i Oukitel dia manondro fa ny C15 Pro dia hamely ny tsena amin'ny Android 9 Pie
Ny UMIDIGI S3 PRO: sainam-by vaovao amin'ny marika izay azonao raisina amin'ny raffle
Fantaro bebe kokoa momba ny marika UMIDIGI S3 Pro izay azonao vidiana ao amin'ny Indiegogo ary afaka mahazo maimaimpoana ianao amin'ny fanomezana amin'ny Internet.
Vivo V15 Pro: smartphone vaovao misy fakan-tsary azo esorina
Fantaro ny zava-drehetra momba ny Vivo V15 Pro, ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa izay manana fakantsary azo esorina ary efa natolotra.
Vivo U1: Ny fahan'ny fidirana bateria lehibe vaovao
Fantaro misimisy kokoa momba ny antsipirian'ny Vivo U1, ilay finday avo lenta fidirana vaovao avy amin'ny marika sinoa natolotra ofisialy.
OUKITEL C13 Pro: finday avo lenta vaovao an'ny marika
Fantaro bebe kokoa momba ny OUKITEL C13 Pro, finday avo lenta vaovao an'ny marika izay havoaka amin'ny fomba ofisialy amin'ny volana martsa ao amin'ny magazay.
Fantaro bebe kokoa momba ny OUKITEL C15 Pro, ilay finday avo lenta vaovao misy ny rano mitete avy amin'ny marika sinoa, efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Vivo dia manambara ny IQOO, ny mari-pamantarana vaovao
Fantaro bebe kokoa momba ny IQOO, ilay marika vaovao noforonin'i Vivo ary hifantoka amin'ny ampahan'ny filalaovana finday avo lenta amin'ny Android.
Nubia dia hanolotra fitaovana azo ahodina ao amin'ny MWC 2019 ihany koa
Fantaro misimisy kokoa momba ny fampisehoana Nubia ao amin'ny MWC 2019 izay hanoloran'izy ireo amin'ny fomba ofisialy fitaovana iray azo aforitra.
Unboxing Umidigi One Max. Sarimihetsika 6.3 ″ rehetra izay latsaka ny 200 € !!
Lahatsary izay itondrako anao ny unboxing & ny fiheverana voalohany an'ny Umidigi One Max, Android midadasika tsara eo anelanelan'ny vola 200.
Vivo APEX 2019: telefaona vaovao tsy misy bokotra, port na slots
Fantaro bebe kokoa momba ny finday vaovao an'ny marika, ny Vivo APEX 2019, smartphone vaovao tsy misy bokotra na slot. Fantaro izao ny antsipiriany.
Mieritreritra ny hanavao ny smartphone? Araraoty ireo tolotra TomTop ireo
Ireo tovolahy ao amin'ny TomTop dia nametraka andiany tolotra maromaro hanavao ny terminal izay tsy azontsika hadino.
Ny Redmi voalohany miaraka amin'ny Android Go manakaiky kokoa
Fantaro bebe kokoa momba ny Redmi Go, ny telefaona voalohany an'ny marika manana Android Go izay havoaka tsy ho ela araka ny famoahana maromaro.
Vivo Y89: Ofisialy vaovao eo anelanelan'ny marika izao no ofisialy
Fantaro misimisy kokoa momba ny pitsopitsony, ny vidiny ary ny fanombohana ny Vivo Y89, ilay marika afovoany vaovao an'ny marika sinoa efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Afaka maka ny OUKITEL WP2 amin'ny vidiny mirary ianao
Fantaro bebe kokoa momba ity OUKITEL WP2 azonao raisina izao amin'ny vidiny tsara indrindra amin'ity fampiroboroboana ity hatramin'ny 20 Janoary.
Araraoty ity tolotra ity ary mividiana Oukitel U23 amin'ny vidiny 180 Euros fotsiny
Ny fotoana alohan'ny Krismasy, miaraka amin'ny varotra izay vita rehefa lasa izy ireo, no tsara indrindra ...
Ny Coolpad M3 dia ofisialy: telefaona fidirana miaraka amin'ny HD + tontonana (19: 9) ary bebe kokoa amin'ny vidiny mirary tokoa
Ny Coolpad M3 dia ofisialy izao. Ianaro ny momba ny fiasa sy ny pitsony teknika an'ity smartphone vaovao ity.
Honor, ny marika kely an'i Huawei, dia nanambara fa izy no mpilalao sangany indrindra tamin'ny Andron'ny Singles tamin'ny resaka habetsaky ny varotra sy ny vola miditra.
Ny ZTE Axon 9 Pro dia hanomboka amin'ny tapaky ny volana oktobra any China
Ny ZTE Axon 9 Pro dia hamely ny tsena sinoa manomboka amin'ny tapaky ny volana Oktobra, araka ny fanamafisana vao tsy ela izay nataon'ity orinasa ity ihany.
Ny Xiaomi Mi 8 Pro dia havoaka amin'ny fomba ofisialy any ivelan'i Sina. Hijery misimisy kokoa momba ny fanombohana ny marika farany ambony vaovao an'ny sinoa.
Ny Xiaomi Mi 8 Lite dia havoaka ivelan'i Sina
Ny Xiaomi Mi 8 dia havoaka amin'ny tsena iraisam-pirenena. Fantaro bebe kokoa momba ny fandefasana an'ity telefaona ity amin'ny tsena vaovao ivelan'i Shina.
Ny Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dia hanana anarana hafa ivelan'i Shina
Hanova ny anarany ivelan'i Shina ny Xiaomi Mi 8 Explorer Edition. Fantaro bebe kokoa momba ny anarana vaovao an'ny avo lenta amin'ny tsena hafa.
Honor Note 10 izao dia azo tehirizina any Shina
Nambara ny famaritana ofisialy ny Honor Note 10. Jereo bebe kokoa momba ny faran'ny farany marika vaovao sinoa tonga amin'ny herinandro ambony.
Huawei dia nametraka ny tenany ho marika be mpividy indrindra ao Shina
Huawei dia mampitombo ny varotra ary manamafy ny tenany ho mpivarotra tsara indrindra any Shina. Fantaro bebe kokoa momba ny varotra ny marika any amin'ny firenenao.
Ny Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dia havoaka amin'ny 30 Jolay any China
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition dia havoaka amin'ny fomba ofisialy any Shina amin'ny 30 Jolay. Aorian'ny tsiambaratelo am-bolana dia fantatsika hoe rahoviana no hamely ny tsena izany.
Nokia 5.1 Plus hanomboka any ivelan'i Shina tsy ho ela
Hanomboka amin'ny tsena vaovao tsy ho ela ny Nokia 5.1 Plus. Fantaro misimisy kokoa momba ny fandefasana ny elanelam-potoana any ivelan'i Shina izay hitranga tsy ho ela.
Vivo Z1i: ny afovoany vaovao an'ny marika sinoa
Vivo Z1i: famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy. Fantaro bebe kokoa momba ny elanelam-potoana vaovao an'ny marika sinoa havoaka tsy ho ela.
Xiaomi Mi Pad 4: takelaka vaovao an'ny marika sinoa
Xiaomi Mi Pad 4: famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro misimisy kokoa momba ilay takelaka vaovao an'ny marika sinoa natolotra androany.
Ny Nokia X6 dia manomboka ao Shina amin'ny loko manga vaovao. Fantaro misimisy kokoa momba ilay kinova finday vaovao izay efa natomboka tany Sina.
OPPO Find X: Ny sainam-bokin'ny mpanamboatra sinoa vaovao
OPPO Find X: Famaritana, vidiny ary fanombohana. Fantaro bebe kokoa momba ny finday avo lenta amin'ny marika sinoa izay efa natolotra tamin'ny fomba ofisialy.
Ny Lenovo Z5 dia namidy tamin'ny andro voalohany namidy tany Chine. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny telefaona marika Sinoa tamin'ny nanombohany.
Ny Xiaomi Mi Max 3 dia efa voamarina tany Sina
Ny Xiaomi Mi Max 3 dia efa voamarina tany Sina. Fantaro bebe kokoa momba ny fanamarinana an-tariby, izay ahafantarantsika ny mombamomba azy
Ny Nokia X6 dia mivarotra any Shina indray
Ny Nokia X6 dia amidy indray amin'ny varotra tselatra vaovao any Shina. Hijery misimisy kokoa momba ny fahombiazan'ny marika eo anelanelan'ny marika amin'ny fandefasana azy.
Ny Xiaomi Mi 8 dia amidy ao anatin'ny 37 segondra amin'ny andro voalohany ao Shina. Fantaro misimisy kokoa ny fahombiazan'ny marika avo lenta amin'ny marika sinoa amin'ny fandefasana azy any amin'ny firenenao.
iVoomi i2: ny ambany farany ambany natomboky ny orinasa sinoa
Hihaona amin'ny iVoomi i2, finday avo lenta izay vao nanomboka teto India tamin'ny vidiny ara-toekarena, izay horesahintsika manaraka. Ho fanampin'izay, hodinihinay ny toetra sy ny fikafika teknika rehetra izay miaraka amin'ity fitaovana ity. Mamaky hatrany!
Ny Vivo Z1 dia natomboka tany Sina ho toy ny antonony. Mahalalà azy!
Vivo dia mitondra antsika ny Vivo Z1, ny elanelam-potoana vaovao misy azy izay efa tafiditra ao amin'ny katalaogin'ny orinasa miaraka amin'ny vidiny mifanaraka amin'izay ampanantenainy. Ity fitaovana ity dia miaraka amina endrika izay mampahatsiahy antsika ny iPhone X an'i Apple, ny sainam-pirenen'ny orinasa amerikana ankehitriny. Manitatra anao izahay!
Ny Nokia X6 dia amidy ao anatin'ny 10 segondra ao Shina
Ny Nokia X6 dia namidy tao anatin'ny 10 segondra monja tao Sina. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny finday vaovao an'i Nokia eny an-tsena any Shina.
Ny Moto 1S dia natomboka tany Sina miaraka amin'ny SD450
Motorola, ilay orinasa an'ny Lenovo, dia nanangana ny Moto 1S vaovao any Shina, terminal misy tombony izay mampahatsiahy antsika betsaka ny Moto G6 natomboka tamin'ny volana lasa teo niaraka tamin'ny Moto G6 Play sy Moto G6 Plus.
Galaxy S9 sy S9 + dia manomboka amin'ny mena ao Shina
Ny Galaxy S9 sy S9 + misy mena ao Shina. Fantaro bebe kokoa momba ny loko mena vaovao azon'ny avo lenta eny an-tsena any Shina.
Dika roa an'ny Galaxy Note 9 voamarina any Shina
Dika roa an'ny Galaxy Note 9 no voamarina tany Sina. Fantaro misimisy kokoa momba ny avo lenta an'ny orinasa izay hanana kinova roa samihafa.
Voamarina: Ny OnePlus 6 dia haseho amin'ny 17 Mey any Shina
Hiseho amin'ny fomba ofisialy amin'ny 6 May any China ny OnePlus 17. Fantaro bebe kokoa momba ny fampisehoana finday avo lenta amin'ny volana Mey, izay efa nohamafisin'ny orinasa ihany.
Ny Xiaomi Mi Mix 2S dia namidy tany Sina
Ny Xiaomi Mi Mix 2S dia mandany ny tahiry feno ao Shina. Fantaro bebe kokoa ny fahombiazan'ny varotra telefaona marika shinoa izay efa amidy amin'ny magazay ao amin'ny firenenao.
Hihaona amin'ny Huawei Enjoy 8, fitaovana tonga miaraka amina lafin-javatra voalamina tsara amin'ny zavatra ampanantenainy, ahitantsika ny tontonana manify 18: 9, mpikirakira Qualcomm SD430, ary famolavolana somary voapolotra nametraka azy teo ambony latabatra toy ny tsara tarehy , finday kanto sy mahery. Atolotray anao izany!
Xiaomi dia manambara amin'ny fomba ofisialy ny Mi Box 4 sy 4c izay tsy misy afa-tsy any Shina
Androany Xiaomi dia nanambara boaty fahitalavitra Smart roa vaovao, lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ny Mi Box 4 sy 4c
Ireo finday avo lenta 10 be mpividy indrindra any Sina tamin'ny 2017
TOP 10 finday avo lenta finday avo lenta any Shina amin'ny taona 2017. Fantaro bebe kokoa momba ilay lisitra amin'ny telefaona amidy indrindra any Shina tamin'ny taon-dasa.
Ny ZTE Axon M dia havoaka amin'ny fomba ofisialy any amin'ny firenena lehibe indrindra any Azia. Ny hetsika dia hatao any Beijing, ary eto Androidsis, manana ny antsipiriany ho anao izahay.
Niseho tamin'ny fomba ofisialy ny Samsung W2018 vaovao, lazainay aminao ny antsipiriany rehetra momba ity finday 'shell type' ity izay ho tonga eo amin'ny tsena sinoa tsy ho ela
Ny Xiaomi Redmi 5A dia natolotra tany Shina | Lazainay aminao ny pitsopitsony
Xiaomi dia manolotra ny finday avo lenta vaovao izay hanjaka amin'ny faritra ambany miaraka amin'ny tahan'ny kalitao / vidiny tsara indrindra. Io no Xiaomi Redmi 5A. Lazainay aminao!
Qualcomm dia nanao sonia fifanarahana 12.000 amin'ireo mpanamboatra sinoa lehibe
Fotoana fohy taorian'ny fitsidihan'i Donald Trump tany Shina dia nambara ny fifanarahana Qualcomm miaraka amin'ireo mpanamboatra sinoa Xiaomi, Oppo ary Vivo.
Oppo F5, ilay finday sinoa izay hahatonga anao hanadino an'i Samsung sy ny iPhone
Ny Oppo F5 dia finday sinoa azonao ampiasaina amin'ny fomba mahafinaritra nefa tsy misy finday avo lenta misy ny Samsung na Apple logo.
OUKITEL MIX 2, ilay vaovao avy amin'ny mpamokatra sinoa
Hihaona amin'ny OUKITEL MIX 2, ny filohan'ity mpanamboatra sinoa ity ho eo an-tampon'ilay faritra, finday avo lenta izay mety hahamenatra indrindra
Ilay Huawei Mate 10 Lite izay nandrasana hatry ny ela dia mety ho efa nanao ny laharam-pahamehana tany Shina tamin'ny anarana hoe Huawei Maimang 6 alohan'ny handefasana ny tenany amin'izao tontolo izao.
Ny famaritana ny Xiaomi Mi Mix 2 dia efa an-tserasera ary manondro ny iray amin'ireo telefaona sinoa tsara indrindra amin'ny 2017
Ny famaritana ny Xiaomi Mi Mix 2 dia efa hita an-tserasera ary manondro ny iray amin'ireo telefaona sinoa tsara indrindra amin'ny 2017.
Jereo ny smartwatches sinoa tsara indrindra miaraka amin'ny tahan'ny kalitao / vidiny tsara, amin'izay, mandany vola kely dia afaka mividy famantaranandro feno ianao. Nohavaozina tamin'ny septambra 2021
Comio, mpanamboatra finday avo lenta sinoa hafa miditra amin'ny tsenan'i India
Ny orinasan'ny orinasa Shinoa Comio dia mikasa ny handresy ny tsenan'i India amin'ny alàlan'ny fananganana telefaona finday telo vaovao sy maodely tsy miankina ivelan'ny Internet
Aiza no hividianana finday sinoa? Misafidy fivarotana Espaniola sy vahiny tsara indrindra izahay ahafahanao mividy finday sinoa tsara indrindra eny an-tsena
Jereo hoe iza amin'ireo takelaka sinoa tsara indrindra amin'izao fotoana izao. Raha mitady takelaka tsara sy tsara tarehy ary mora ianao dia aza hadino ny lisitra nohavaozina tamin'ny septambra 2021
Ny mobiles sinoa tsara indrindra 100 Euro latsaka
Mihaino ny fisafidianana ireo finday sinoa tsara indrindra amin'ny vola latsaky ny 100 euro izay azonao vidiana miaraka amin'ny sandan'ny vola tsara indrindra. Lisitra nohavaozina!
Nanambara ofisialy tany China ny Oppo R11
Ny mpamokatra sinoa Oppo dia mandefa ny sainam-bolony vaovao, ny Oppo R11, finday avo lenta mahery vaika, manana kalitao faran'izay tsara, fakan-tsary roa ary vidiny ambany
Samsung dia mamoaka fanontana Galaxy S8 Pirates an'ny Karaiba any Shina
Samsung dia mamoaka fanontana manokana an'ny Galaxy S8 aingam-panahy avy amin'ilay sarimihetsika Pirates of the Caribbean vaovao natolotra tao anaty vata harena
Mobiles sinoa avo lenta sy azo antoka dimy
Ampahafantarinay anao ny finday avo lenta sinoa dimy mora sy tsara kalitao, ny sasany misy fika manokana sy famolavolana ary ny hafa ambany ambany.
Samsung sy Apple dia mbola manohy very tany amin'ny orinasa sinoa
Tatitra farany Gartner dia manamafy ny angona avy amin'ny asa IDC teo aloha: Samsung sy Apple Cede Market Share amin'ny mpanamboatra sinoa
Manaja 6A eo afovoany vaovao amin'ny vidin'ny knockdown
Vao nanolotra ny Honor 6A any China i Honor, telefaona antonony izay tsy hihoatra ny 150 euro amin'ny fifanakalozana
Huawei dia maka ny toerana avo indrindra amin'ny Oppo ary lasa marika mpanamboatra smartphone lehibe indrindra mandritra ny telovolana voalohany 2017
OnePlus 5, tsaho momba ilay goavambe sinoa vaovao
Tsaho vaovao momba ny OnePlus 5, ilay finday avo lenta vaovao avy amin'ny orinasa sinoa OnePlus izay mitady hifaninana amin'ny Samsung Galaxy S7 Edge ary hanana efijery miolaka.
Ireo no datin'ny fanavaozana ny Nougat ho an'ny modely Huawei any Shina
Ny Huawei P9 dia azo havaozina amin'ny Nougat amin'ny herinandro ambony raha ny lisitra iray izay mampiseho ireo fanavaozana rehetra avy amin'ny marika sinoa.
Xiaomi Mi Electric scooter no vaovao avy amin'ny orinasa sinoa
Môtô "marani-tsaina" elektrika no vokatra vaovao an'ny orinasa sinoa Xiaomi, izay nantsoiny hoe scooter elatra Mi ho an'ny $ 289 mahery.
Ny finday finday Android sasany dia mety nandefa data manokana tany Sina
Smartphone maherin'ny 700 tapitrisa Android finday mora vidy no manana rindrambaiko manangona ny angon-drakitry ny mpampiasa ary mandefa izany any amin'ireo mpizara any Sina
Huawei Mate 9 Pro izao dia ofisialy any Shina miaraka amin'ny efijery 5,5 ″ QHD, RAM 6GB ary Android 7.0
Ny Huawei Mate 9 Pro dia efa zava-misy any Shina satria naseho ho smartphone 5,5 "misy vahaolana QuadHD sy Android 7.0.
Ny Moto M dia ofisialy any Shina ankehitriny miaraka amin'ny batterie 3.050mAh sy vatana vy
Ny Motorola Moto M dia efa telefaona ofisialy any Shina miaraka amina andiana famaritana tena mahaliana ary $ 295 ny vidiny.
Xiaomi dia mivarotra ny Mi Note 2 rehetra ao anatin'ny 50 segondra fotsiny ao Shina
Tao anatin'ny 50 segondra fotsiny Xiaomi dia afaka nivarotra ny Mi Note 2 rehetra tamin'io varotra varotra natomboka ora vitsy lasa izay.
Vivo X7 sy Vivo X7 Plus dia naseho tany Shina tamin'ny puce Snapdragon 652 sy fakan-tsary 16MP
Ny Vivo X7 sy Vivo X7 Plus dia naseho tany Shina miaraka amina puce Snapdragon 652 sy fakan-tsary 16MP anoloana mba hakana selfie tsara indrindra.
Xiaomi indray no mpanapaka lehibe any Shina amin'ny volana aprily
Tamin'ny volana aprily, Xiaomi dia nahazo ny 26 isan-jaton'ny tsenan'ny iray amin'ireo lehibe indrindra manerantany, ny sinoa.
Ity no Vivo X6SPlus
Nivoaka an-tsokosoko ny terminal vaovao iray tampon-kavoana avy amin'i Vivo. Ity no Vivo X6SPlus.
Ny singa rehetra an'ny Xiaomi Mi Pad 2 dia namidy tao anatin'ny iray minitra tany Sina
Ny singa rehetra an'ny Xiaomi Mi Pad 2 dia efa namidy tao anatin'ny iray minitra latsaka taorian'ny nametrahan'ny Xiaomi azy io hividianana an-tserasera.
Ny hoavin'ny Android dia ao amin'ny terminal terminal sinoa
Ireo no taratry ny eritreritro sy ny eritreritro izay nahatonga ahy hieritreritra fa ny ho avin'ny Android dia any amin'ny terminal Shinoa
Xiaomi no orinasa mivarotra finday avo lenta indrindra ao Shina
Xiaomi dia nahazo ny toerana voalohany amin'ny maha mpanamboatra azy izay mivarotra telefaona betsaka indrindra amin'ny tsena Aziatika. Hafiriana no haharitra?
Lenovo dia mandefa ny tsipika Vibe X3 any Shina miaraka amina fahaiza-manao feo lehibe
Any Chine dia efa afaka mividy maodely Vibe X3 telo izy ireo, toy ny fenitra, ny Premium ary ny Lite. Samy mizara efijery Full HD 5,5-inch avokoa izy telo.
Samsung Galaxy On5 sy Galaxy On7 dia ofisialy any Shina ankehitriny
Ny Galaxy On5 sy ny Galaxy On7 dia efa natomboka tany Sina, izay ho avy amin'ny vidiny lafo dia tsara, manome fitaovana mitambatra tsara ho an'ny ambany.
Huawei no mpanamboatra be mpividy indrindra ao Shina
Raha ny angom-baovao navoaka farany dia Huawei no mpanamboatra telefaona be mpividy any China. Mazava ho azy fa ny varotra no resahina fa tsy ny tombom-barotra.
Huawei izao no mpivarotra finday avo lenta lehibe indrindra any Shina
Firenena tsara handrefesana ny satan'ireo mpamokatra manan-danja indrindra toa an'i Huawei i Shina ankehitriny, izay nandresy tamin'ity telovolana farany ity.
Elephone Ele Watch, famantaranandro sinoa miaraka amin'ny Android Wear mitentina 115 dolara
Ny Elephone Ele Watch no ho smartwatch mora vidy voalohany amin'ny Android Wear.
Xiaomi nohadihadian'ny governemanta Shinoa noho ny fanitsakitsahana ny lalàna momba ny fifaninanana doka.
Elephone dia iray amin'ireo mpanamboatra sinoa manintona ny sain'ny maro. Ankehitriny dia manolotra ny terminal Elephone Vowney, ny terminal misy azy matanjaka indrindra izy.
Elephone Ele Watch, ity dia smartwatch sinoa miaraka amin'ny Android Wear
Elephone dia eo am-pelatanany izay mety ho ny smartwatch sinoa voalohany amin'ny Android Wear. Navoaka ny Elephone Ele Watch ary hitantsika ny endrik'izany.
Xiaomi dia mbola Mpanjakan'ny varotra any Shina ihany
Tsy misy olona afaka mamaha an'i Xiaomi. Ilay mpanamboatra sinoa dia mbola mpanjifa varotra any Sina ihany.
OnePlus 2 dia amidy ao Shina ao anatin'ny 1 minitra monja
Ilay OnePlus 2 dia nantsoina ho iray amin'ireo faran'ny taona ary namidy tao anatin'ny 1 minitra monja i Sina.
Telefaona sinoa, tombony ary fatiantoka
Lazainay aminao ny tombony sy fatiantoka rehetra ananan'ny finday sinoa ary inona avy ireo zavatra tsy maintsy raisinao rehefa mividy azy ireo.
Xiaomi dia mandefa Mi Note Pro any Shina miaraka amin'ny efijery QHD sy RAM 4GB
Xiaomi Mi Note Pro dia natomboka tany Shina ary tonga miaraka amin'ny fehin-kevitry ny efijery QHD ary vahaolana amin'ny olan'ny maripana ao amin'ny puce Snapdragon 810
Lenovo A3900, vidiny ambany avy amin'ny orinasa sinoa
Ny kaompania sinoa dia eo am-pelatanany ny terminal mora vidy, ny Lenovo A3900, finday mora vidy miaraka amin'ny famaritana sy ny vidiny.
No. 1 S6i, klone sinoa an'ny Galaxy S6
Ny No 1 S6i dia klone sinoa an'ny Galaxy S6. Klone iray tena tsara natao ety ivelany fa samy hafa be amin'ny lafiny famaritana.
UleFone Be Touch, terminal sinoa mitovy amin'ny iPhone 6
UleFone dia orinasa sinoa tsy dia fantatra loatra ivelan'ny tsena aziatika, na dia te-hivelatra amin'ny tsena vaovao misy terminal vaovao aza ny orinasa.
Oppo R7, sainam-pirenen'ny mpamokatra sinoa
Ny Oppo R7 no ho marika voalohany amin'ny mpanamboatra sinoa ary ho lasa finday manify indrindra eto an-tany, ary 4,85 mm ny hateviny.
Xperia Z3 dia hita ao anaty tahiry fanamarinana sinoa
Ny Xperia Z3 amin'izao fotoana izao dia toa tsy dia samy hafa be amin'ilay teo alohany Z2 raha ny fantatra ankehitriny
Xiaomi Mi4 dia efa misy fa any Chine ihany izao
Xiaomi Mi4 dia iray amin'ireo finday avo lenta mahaliana indrindra amin'izao fotoana izao ary tsy ho ela dia hipetraka eo akaikintsika akaiky izy io
Ny sary voalohany an'ny LG G3 Mini dia miseho ao Shina
Ny sary voalohany an'ny LG G3 Mini dia tafaporitsaka, izay ahitantsika ny endriny, izay nalaina avy tamin'ny zokiny lahy.
Mendrika ny mividy finday sinoa ve?
Ny iray amin'ireo fanontaniana manelingelina ny mpanjifa mety ho maro dia ny hoe mendrika ny mividy finday sinoa ve izany. Eny ny valiny
IPad mini miaraka amin'ny Android? misy safidy hafa mahomby mividy any Shina
Klone tonga lafatra amin'ny mini iPad dia takelaka Android izay amidy any Chine $ 200.
Ny orinasa sinoa dia manome clone tonga lafatra amin'ny iPhone5
Mpanamboatra sinoa iray no nanolotra ny clone ny iPhone5 eny an-tsena, izay miasa ho toy ny rafitra miasa Android ary miaraka amina interface iOS.
Huawei Ascend D2, filokana sinoa ho an'ny avo lenta
Ny Huawei Ascend D2 dia Smartphone vita amin'ny sinoa izay tian'i Huawei hiditra tanteraka amin'ny sehatry ny tsenan'ny finday avo lenta.
Samsung W899, Android somary mampiavaka an'i Shina
Ny Samsung W899 dia terminal efa tonta miaraka amin'ny fonony clamshell fa miaraka amin'ny fahitana manokana ny fisian'ny efijery roa amin'ny akorany ambony.
Takelaka vaovao miaraka amin'ny rafitra fikirakirana finday Android. Amin'ity indray mitoraka ity dia ny TechPad, fitaovana vita any Sina
Huawei C8600 miaraka amin'ny Android 2.1 dia aseho any Shina
Ny Huawei C8600 dia natolotra androany tany Shina miaraka amin'ny toetra mampiavaka azy miaraka amin'ny Android 2.1